Al-shabaab oo Mowqif Cad ka Istaagtay Imaanshaha Ciidamada Ingiriiska e Somalia – Radio Daljir
Al-shabaab oo Mowqif Cad ka Istaagtay Imaanshaha Ciidamada Ingiriiska e Somalia
Oktoobar 7, 2015 5:14 b 0
Arbaco, Oktoobar 07, 2015 (Daljir) — Xarakada Al-shabab ee Soomaaliya ayaa wacad ku martay in ay kusoo dhaweeyn doonaan ciidamada Britten ee looso diraayo dalka Soomaaliya rasaas marka ay u yimaadaan in ay taageeraan ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya.
Todobaadkii tagay ayay ahayd markii uu Ra’iisul wasaaraha dalka Britten David Camiroon uu u dhawaaqay qorshaha ay xukuumadiisa ay ciidamo gaaraya 70-askari ugu soo direyso Soomaaliya waxana la socda qubaro ka taagera dhinaca loojistikada,caafimaadka iyo farsamada howlgalka AMISOM.
Sheekh Cali Maxamuud Raage afhayeenka guud ee Xarakada Al-shabaab ayaa sheegay in ay rajeenayaan in la arki doono Jismiyo cadaan ah oo madaxa laga jaray.
Warka Britten kazoo yeeray ayaa waxa uu ku sheegay in ay tahay mid cadowtooynimo Muslimiinta ka dhan ah waxana uu ku eedeyay isku day ay ku doonayan in ay gumaysi ku galiyaan dalka Soomaaliya.
Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ay rasaas kala hortagi doonaan ciidamadaasi,waxana uu yiri “waxaad arki dontaan meydadkooda oo lagu soo bandhigo baraha internetka”.
Nin Madaxweyne Sheegtay oo lagu Xiray Gobolada Dhexe
Dowladda Jarmalka oo Balan-Qaadyo u samaysay Puntland